Izingcingo zeqembu labathengi le-USRTK kuJon Entine Wokwembula Imali, Ubopha Izimboni Azivikelayo - Ilungelo Lethu LaseMelika
Izingcingo zeqembu labathengi le-USRTK kuJon Entine Wokwambula Uxhaso, Zibopha Izimboni Azivikelayo
Posted on Mashi 2, 2016 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesithathu, Mashi 2, 2016
UJon Entine, umkhakha wezimboni zamakhemikhali ohola phambili one- kubhalwe izindatshana eziningi ezivikela izintshisekelo zebhizinisi, namuhla uhlasele i- Isikole Sobuntatheli saseColumbia University, isho ukuthi “igcobe u-Exxon,” yenza “ubuntatheli bezokugqugquzela,” futhi yaqasha “isishoshovu” ukuba siphathe iSikole Sobuntatheli.
Ngokuphendula, iqembu labathengi i-US Right to Know linxenxe i-Entine ukuthi iveze imininingwane egcwele ngezimali zakhe kanye nezibopho zakhe ezimbonini uyavikela in ukubhala kwakhe.
"Ngubani oxhasa uJon Entine kanye ne-Genetic Literacy Project?" kubuza uGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know. “Ngabe uJon Entine uzobadalula abaxhasi bakhe? Uma kungenjalo, yini ayifihlayo? ”
Embhalweni wakhe weNew York Post namuhla, ukuhlasela kwe-Entine umklomelo intatheli uSusanne Rust, ongumhleli ophenyayo e-Columbia Journalism School. U-Entine uyehluleka ukusho ukuthi uRust nombhali osebenza naye uMeg Kissinger baveze izibopho zomkhakha ezingadalulwanga zeqembu le-Entine's STATS ku Indatshana ka-2009 iMilwaukee Journal Sentinel, ebike ukuthi “i-STATS ithi izimele futhi ayithathi hlangothi. Kepha ukubuyekezwa kwemibiko yayo yezezimali kukhombisa ukuthi igatsha leCentre for Media and Public Affairs. Leli qembu lakhokhelwa imboni kagwayi ukuze liqaphe izindaba ezithinta ubungozi bukagwayi. ”
Iphrojekthi ye-Genetic Literacy Project phambilini wakumemezela lokho "ihlangene ne-non-profit Statistical Assessment Service (STATS)." Kodwa-ke, i-Genetic Literacy Project isuse ireferensi ku-STATS kusuka kuwebhusayithi yayo. Umugqa wokuqala we-Entine eNew York Post wawubiza ngaye ngokuthi “umuntu ophezulu e-STATS, ”Futhi u-Entine ubize i-STATS njengo“inhlangano ephethe i-Genetic Literacy Project, lapho ngisebenza khona. ”
U-Entine ungumqondisi omkhulu weqembu eliphambili lemboni yezolimo Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, iqembu elinemali engaziwa elihlasela njalo izishoshovu, izintatheli nososayensi abaphakamisa ukukhathazeka ngezingozi zezempilo nezemvelo zokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kanye nemithi yokubulala izinambuzane.
I-Entine's New York Post indatshana yakhe ingeyesibili engena enkundleni yezombusazwe yezulu, evikela izinkampani zikawoyela nokuhlasela amaqhawe okushintsha kwesimo sezulu. NgoFebhuwari 1, Entine wabhala ukuhlaselwa kukaProfesa waseHarvard uNaomi Oreskes, Co-nombhali Abahwebi Ukungabaza: Indlela Ososayensi Abambalwa Abalitholile Ngayo Iqiniso Ezindabeni Ezisukela Emshunwini Wogwayi Kuya Ekushiseni Komhlaba Wonke.
U-Entine ungumkhulumeli onethonya embonini yezolimo. Izicelo ze-FOIA ezenziwe yi-US Right to Know wembule izibopho zika-Entine nentatheli ye-New York Times u-Amy Harmon, umbhali wephephandaba wase Washington Post UTamara Haspel, kanye nentatheli ye-pro-GMO UKeith Kloor.
Ngo 2012, U-Entine uthi "akazi" ukuthi uSyngenta wayexhasa inhlangano (Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo) owashicilela incwadi yakhe evikela umuthi wokubulala ukhula kaSyngenta, i-atrazine, ngokusho kombiko kaTom Philpott kwi-Mother Jones.
U-Entine une wenza umsebenzi wokuvikela izimboni zamakhemikhali, izibulala-zinambuzane, ezimbiwa phansi kanye nezimboni zamandla enuzi. Ngemininingwane engaphezulu kuJon Entine, funda Ishidi lamaqiniso le-US Right to Know ngaye.